Inona no datin'ny lohataonan'ny equinox - daty izay ny andro, ny teboka, ny fialantsasatra, ny famantarana sy ny fomban'ny Slavy, Scandinavians, Japon
Ireo fombam-pivavahan'ny Eglizy - fombafomba sy fombafomba, ahoana no hankalazana?
Ny tranga miavaka amin'ny natiora sy ny fiandohan'ny lohataona astrolojia dia ny lohataona equinox. Androany dia mystika, ary manana hery lehibe izay azo ampiasaina amin'ny tsara. Misy ny finoanoam-poana, ny fomban-drazana sy ny fombafomba niforona tany am-piandohana.
Amin'ny volana iza no hitan'ny masoivohon'ny vazimba?
Ny fiandohan'ny lohataona amin'ny lohataona sy ny fararano (ny autumnal equinox) dia manondro fotoana lava, izay antsoina hoe taona tropikaly. Ampiasaina handrefesana ny fotoana, ary misy 365 andro eo ho eo amin'ny masoandro izany, ka isan-taona dia mitranga amin'ny fotoana samihafa ny fisehoan-javatra. Ny famaritana ny datin'ny lohataonan'ny equinox, dia ilaina ny manamarika fa ity zava-mitranga ity dia latsaka tamin'ny faha-20 marsa.
Andro iray hafa miavaka, izay mitahiry ny lohataona equinox - andro sy alina amin'ny firenena rehetra dia mitovitovy amin'ny fotoana mitovy. Nandritra ny fotoana ela dia nino ny olona fa mifanakaiky amin'ny fisehoan-javatra mampiavaka ny zava-miafina ny fisehoan'ny mystika. Rehefa ampitovina amin'ny hazavana sy ny haizina ny andro, dia havaozina ny natiora. Ity andro ity dia nomem-boninahitra tamin'ny hery manokana tamin'ny finoana mpanompo sampy.
Ny lohataona equinox any Slavy
Misy dikan-teny maromaro mikasika ny fomba niantsoan'ny vahoaka slavy ity fialan-tsasatra ity: Red Hill, Great Day, Krasnogor ary Komoditsa. Misy fomban-drazana samihafa mifandraika amin'izany: ny olona dia nandihy dihy, nandihy ary nanao fety.
Eo amin'ny latabatra dia be dia be foana, ary anisan'izany ny sombin-tsavoka, ny pancakes ary ny fofona amin'ny masoandro. Ny Slaviana dia tsy nisotro zava-pisotro misy alikaola.
Tamin'ny andron'ny lohataona equinox, ny fetin'ny Slavy dia niaraka tamin'ny famatsian-tsakafo sy ny sombiny teo amin'ny havoan'ny vorona, satria naneho ny fanahin'ny maty izy ireo.
Araka ny fomban-drazana iray hafa, dia nisy kodiarana nirehitra, nopetahana taolam-paty marevaka, nidina avy teny an-tendrombohitra, izay nanondro masoandro masoandro sy ny fahatongavan'ilay andriamanibavy lohataona.
Ao amin'ny lohataona equinox ny Slavy dia nandeha nitaingina tetezana mba hahafinaritra sy hodi-boanio vita amin'ny mololo ao anaty tifitra, izay maniry ny taona maro, ny fanambinana ary ny fijinjana be. Mba hanome ny andriamanitra ho an'ny afo, dia nanipy varimbazaha izy ireo ary nanadio ny fanahy dia nila nitsambikina tamin'ny afo.
Spring Equinox any Scandinavians
Ny fomban-drazany amin'ny fankalazana ny fankalazana ny spring equinox dia niaraka tamin'ireo Scandinavians, ohatra, izy ireo dia voatery nilalao lalao tamin'ny fitaovam-piadiana sy ny ady ara-tafika. Ny teboka amin'ny lohataonan'ny equinox dia mifandray amin'ny ady ara-pirahalahiana eo anelanelan'ny ririnina sy ny lohataona. Tsara ny manamarika fa ny Scandinavians tamin'ny taona 1600 dia nalaza tamin'ny fiakarana, noho izany dia nanao sarontava biby izy ireo ary nanao lalao samihafa. Ny Alemà dia manana equinox lohataona antsoina hoe Fastnacht (ampahany amin'ny fankalazana mandra-pahatongan'ny herinandro Shrove) sy ny Fasching (telo andro mialoha ny "tontolo iainana").
Spring equinox any Japon
Ny tena dikany dia misy amin'izao fotoana izao any Japana, izay voafetra amin'ny fomban-drazana Buddhistan'i Higan. Ny fankalazana dia manomboka kely kokoa noho ny fialan-tsasatry ny valala equinox - eo amin'ny telo andro mialoha sy ny telo andro manaraka. Ho an'ny Japoney, tena zava-dehibe tokoa ity fotoana ity, satria tsy maintsy mandeha any amin'ny fasan'ny razambeny ny tsirairay ary mivavaka any. Ny vehivavy ao an-kibo dia miteraka fanadiovana ankapobe ao an-trano sy any am-pasana (any am-pasana) an'ny havana. Ny Japoney dia manana fomban-drazana manan-danja iray hafa - sakafo hariva, izay mandritra ny sakafo vegan fotsiny no eo amin'ny latabatra.
Spring equinox - fombam-pivavahana sy fombafomba
Ny Jentilisa dia nanana fomban-drazana sy fombafomba maro mifandraika amin'ny fahavokarana, ny fahatongavan'ny lohataona sy ny taom-baovao. Tamin'ny fomba nentim-paharazana, nisy fankalazana niaraka tamin'ny dihy sy ny hira. Sakafo ilaina - pancakes, maneho ny masoandro. Fombafomba malaza ho an'ny equinox vernal:
Ny iray amin'ireo marika amin'izao androntsika izao dia atody iray, nosoratana tamin'ny tadin'ny masoandro na ny tany.
Tamin'ny andron'ny fahiny, ny olona dia nanala tanteraka ny biby dia, nampiasaina ho an'ity tanjona ity ny fiantraikan'ny feo mahery. Nahoana no lakolosy, ary na dia metaly tsotra fotsiny aza?
Ny lovantsofina tany am-piandohana tao amin'ny valan-java-bozaka dia tokony handeha any amin'ny trano fandroana mba hanadio ny zava-dratsy rehetra.
Tany Boligaria sy Slovakia dia nisy fombafomba natao hampitahorana ny bibilava avy ao an-tranony. Mba hanaovana izany dia nandoro fako tany akaikin'ny trano izy ireo, nanipy azy manodidina ny trano ary avy eo dia nandehandeha manodidina ilay trano izy ireo ary nokapohiny.
Fombafomba amin'ny andron'ny valo equinox amin'ny fitiavana
Ireo ankizivavy tokana mandritra ity fialan-tsasatra ity dia afaka misarika ny fitiavana, izay anaovana ny fombafomba. Ho azy, mila manamboatra volo ianao, sofina, peratra na zavatra toy izany, ny zavatra manan-danja indrindra dia ity akaiky ity isan'andro. Ny fombafomba amin'ny andron'ny equinox vernal dia tarihina araka ny fepetra sasany, ary ity fombam-pivavahana ity dia:
Hazòny ny labozia ary apetraho izy ireo ka eo amin'ny ankavia sy ankavanana. Ny tsara indrindra dia ny mitarika ny lanonana amin'ny vava.
Voalohany dia lazao ny laharana voalazan'ny conspiracy 1, alao ny zavatra voafantina ary ento eo akaikin'ny molotra. Lazao azy ny laharana 2, averimberina indroa. Avy eo dia ento miaraka aminao foana ity zavatra ity.
Fombafomba amin'ny andron'ny lohataona equinox amin'ny vola
Mba hamahanana ny toe-bola misy anao, dia asaina manafaka ny ao anatiny amin'ny atody ary manangom-bola amin'ny fahamendrehana. Aorian'izany dia aleveno eo anoloan'ny tranonao na ao anaty vilia baolina. Ho toy ny talismanana hahasarika ny volanao amin'ny tenanao izany. Misy fombafomba hafa amin'ny andron'ny valala equinox, ohatra, fombafomba amin'ny fampiasana sira. Alohan'ny fiposahan'ny masoandro dia makà sira kely ary lazao azy. Aorian'izany dia mihinana izany, ary amin'ny herintaona dia ho hitanao fa mihatsara ny toe-bola.
Fombafomba momba ny fahasalamana - vernal equinox
Ny herin'io fialantsasatra io dia azo ampiasaina mba hisorohana ny olana ara-pahasalamana sy hiarovana ny tenanao amin'ny tsy fitoviana isan-karazany. Rehefa fantatra ny datin'ny Equinox, dia azonao atao ny manomana fombafomba, izay atao toy izao:
Alohan'ny miposaka masoandro, mialà eo ivelan'ny trano. Miaraha mihinana tantely sy salady misy mofo matsiro miaraka aminao, raha azo atao.
Eo an-kalamanjana, miatrika ny fiposahan'ny masoandro, ary rehefa manomboka mitsangana ny masoandro, dia tsy maintsy manomboka mamaky ilay teboka ianao amin'ny fametrahanao ny tongotra eo amin'ny soratry ny soroka ary manaparitaka ny sandrinao amin'ny sisiny.
Ny palmie dia tokony hipetraka amin'ny masoandro mba hihinana ny heriny. Alao sary an-tsaina hoe ahoana no fomba fametrahana ny vatana amin'ny volamena vita volamena.
Tsy maintsy averina in-telo ny fikomiana. Mba hamenoana ny fombam-pivavahana, hanehoana fankasitrahana ny masoandro sy ny hery ambony indrindra. Avelao hivoaka ny fanomezam-pahasoavana
Raha tsy misy fomba hanaovana fombafomba eny an-dalambe, dia ataovy ny fombafomba eo amin'ny varavarankely atsinanana mba hahafahanao mahita ny masoandro. Ny fankasitrahana dia asaina apetraka eo amin'ny arabe eo ambanin'ny hazo.
Spring equinox - fombafomba ho an'ny vintana
Ny fombam-pivavahana dia tokony ho any irery irery ihany ary ny iray dia tokony manomana labozia mainty sy fotsy, ary koa ny vilany tany, voany ary vola madinika. Mba hisarihana ny vintana tsara mandritra ny taona iray manontolo, dia atolotra amin'ny fiposahan'ny masoandro na filentehan'ny masoandro izany, mba hitazonana izany fombafomba izany:
Mila mifangaro amin'ny labozia ny labozia, fa raha tsy malemy izy ireo, dia afatory amin'ny tadin'ny kofehy mainty sy fotsy. Anatin'izany dia ilaina ny miteny ilay teboka omena etsy ambany.
Ny fombafombam-pitenenana momba ny zokiolona mihinam-po dia manomboka amin'ny fisaintsainana , noho izany, mila mandrehitra labozia ianao ary miala sasatra. Fotoana fohy dia mipetraka mangina ianareo ary miezaka ny manala ny eritreritra ratsy.
Raiso ny voan-tsaha ary lazao azy ireo ny faniriana rehetra, ny drafitra sy ny paikady.
Ao amin'ny faritry ny vilany, mandevona ny vola madinika, mamafy azy ireo amin'ny tany ary mamafy ny voa. Manaova ary ataovy any amin'ny toerana azo antoka. Ny voa mitsimoka dia hameno ny trano amin'ny vintana, manampy amin'ny fanatanterahana ny faniriana.
Day of the Equinox Vernal - signs
Amin'ity fialantsasatra ity dia voarara ny mieritreritra ny ratsy, satria heverina fa amin'izao fotoana izao amin'ny herin'ny hevitra dia afaka manova ny anjaranao ianao. Ny marika eo amin'ny vernal equinox dia manondro fa amin'izao fotoana izao dia tokony hifehy ny fihetseham-pony ny olona mba tsy hiatrehana ny tsy fitoviana eo amin'ny fiainana. Anisan'ny finoanoam-poana ny hoe:
Tamin'ny andro taloha, dia nahazatra ny nandrahoina ny cookies sy ny piesy hafa tamin'ny endriky ny lakana, izay marika sy talismanan'ny fialan-tsasatra. Inoana fa raha mihinana tsiro amin'ny endriky ny loraka ity andro ity, dia afaka manintona fahasalamana mandritra ny taona iray manontolo.
Raha jiro ny andron'ny lohataona equinox, hafanana sy mahavokatra ny lohataona. Rehefa avy ny orana sy ny orana, dia andrasana fa hafanana hafiriana 40 andro.
Jereo ny fomba nahatongavan'ireo leraka - mpiompy lohataona mafana.
Ahoana ny hihaonana amin'ny equinox vernal?
Amin'ity fialantsasatra ity dia efa zatra efa ela ny manome fanomezana ho an'ny hafa, mandray valisoa sy hery tsara. Misy fomban-drazana maro, ny fomba hankalazana ny andron'ny lohataona equinox:
Manehoa fankasitrahana ny natiora noho ny fanomezam-pahasoavany ary azo atao amin'ny endrika samihafa, ohatra, amin'ny fanomezana fanomezana na tsia amin'ny filazana hoe "misaotra".
Manaova zavatra mahafinaritra ho an'ny hafa, fa amin'ny fo madio ihany. Azonao atao ny manamboatra sakafo madinidinika na manasa havana amin'ny sakafo hariva. Rehefa manome zavatra ny olona, ​​dia mandray anjara amin'ny dingam-pandaminana voajanahary.
Ny fikarakarana ny fomba hankalazana ny lohataona equinox, dia mendrika hanomezana tondro iray hafa - mikasika ny natiora. Ohatra, afaka manao karazana fombafomba ianao na mandeha irery irery ao amin'ny valan-javaboary na any amin'ny ala mba hahazoana hery iray
Inona no nofinofin'ny renibeny?
Nahoana no nofinofy milomano ao anaty dobo filomanosana?
Nahoana ny nofy?
Afaka matory eo anoloan'ny fitaratra ve aho?
Nahoana no manonofy ny nofinofy?
Nahoana no nofinofin'ny fitiavan'ny olona iray?
Inona no nofinofisin'ny renibeny maty?
Afaka maka ny Zoma Tsara ve aho?
Ny fihenan'ny alim-bary ho an'ny fahavoazana
Inona no fampiasana lehilahy spermia?
Fitaovam-piadiana amin'ny akne
Nahoana no tsy mihaino ahy sy mihaino ny zanako?
Ny hormona mandona ao amin'ny orona dia ny fitsipika mifehy ny safidy sy ny fomba mahomby indrindra
Inona ny fametrahana sy ny fomba hanangonam-bola amin'ny banky?
Wedding akanjo amin'ny fomba "Stilyag"
Adnexitis havia miankavia
Ny fanomezam-pahefan'ny mpanjono
Ny tahan'ny hCG amin'ny tsy bevohoka
Ahoana no ahafahan'ny petunia avy amin'ny voa - ny famafazana famafazana
Mila visa ho an'i Meksiko ve aho?
Boots Women 2014